Dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland oo qaboobay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland oo qaboobay
May 24, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland oo qaboobay. [Sawirka]
Garowe-(Puntland Mirror) dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland ee deegaanka Tukaraq ayaa qaboobay, sida ilo-wareedyo ciidamada katirsan ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror.
Dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramay in khasaare weyn uu ka dhashay labada dhinacba, balse si madax-banaan looma xaqiijin karo tirada dhimashada.
July 8, 2018 Guddiga horumarinta Garoowe iyo nabadoonada deegaanka oo ka wada-xaajooday sidii loo soo xuli lahaa gole deegaan oo ka soo bixi kara waajibaadkooda
10 Al-Shabab militants killed in airstrike near Mogadishu, U.S. says
Mudane Xildhibaan adoo intaan xasuusan codkaaga bixi!
Dhammaan umadda soomaaliyeed waxa ay indhaha ku hayaan 8-da bisha Febaraayo doorashada madaxtinimo ee maalintaas la asteeyey in ay ka dhacdo caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Waxaa jira waxyaabo badan oo bulshadu niyada ku hayso ayna [...]
Somalia al Shabaab militants stormed into a base used by Ethiopian troops after ramming a suicide car bomb into the entrance on Thursday in the latest assault on soldiers serving with the African Union’s AMISOM [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 20 dagaalyahan iyo hoggaamiye sare oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose, sida ay ku warantay warbaahinta dowladda. Weerarka oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya [...]